ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်ကို အလည်တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်ကို အလည်တစ်ခေါက်
Posted by Novy on Apr 26, 2013 in Photography, Travel | 35 comments
မေမြို့ အနီးစခန်းနားက ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်ကို
မနိုတောင် ခုံမြင့်ဘိနပ်ဖြစ်နေလို့ ရေတံခွန်းသွားတဲ့လမ်းထိပ်လေးမှာရှိတဲ့
ဘိနပ်ချုပ်တဲ့ ဆိုင်လေးမှာ ကိုယ်ဘိနပ်ကိုအပ်ပြီး
ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ရာဘာဘိနပ်ပါးတစ်ရံကို ၃၀ဝ နဲ့ငှားပြီးစီးရပါတယ်
အဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာ ဘိနပ်ပြင်/ ဘိနပ်ငှားသလို တောင်ဝှေးတွေလည်း
တစ်ချောင်းကို ၁၀ဝ နဲ့ရောင်းပါတယ် ဝယ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ရေသန်တို့ အအေးတို့ကတော့ ရေတံခွန်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် နားဖို့တဲလေးတွမှာ ရောင်းပါတယ်
မနိုတို့ စပြီးရေတံခွန်ကိုဆင်းတော့ ၁ဝနာရီကျော်နေပြီ
အသွားမှာတော့ တောက်လျှောက် တောင်းဆင်းလမ်းတွေပါပဲ
နဲနဲတော့ မက်စောက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တောင်ဝှေးလေး
စုစုပေါင်း တောင်ကွေ့ ၂၂ကွေ့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ အသုတ်ဆိုင်ကလေးကတော့ အရမ်းတန်ပြီ
စားလို့ကောင်းပါတယ် အသုတ်တပွဲကို ၅၀ဝပဲပေးရပါတယ်
အပြန်မှာကျတော့ ၁၂နာရီခွဲတော့မယ် အရမ်းကိုနေပူနေတဲ့ အချိန်ကြီးပါပဲ
တောင်တက်လမ်းတွေကြီးပဲမို့ ၂ကွေ့ကို တစ်ခါလောက်နားနေရပါတယ်
ရောက်ခါနီး၅ကွေ့လောက်လိုတော့မှ ဘယ်လိုမှ မတက်နိုင်တော့လို့
အမှတ်တရပါပဲ တစ်ခါမှ အထမ်းမစီးဘူးပါဘူး
ဒီရေတံခွန်ရဲ့ အပေါ်မှာ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့
ဆရာလေးထွက်ပြီလား။ လည်သွားပါတယ်မနိုရေ။ ငယ်ငယ်ကတခါရောက်ဖူးပေမဲ့ ကြီးမှတခါမှ မရောက်တော့ဘူး။ မနိုနဲ့ပဲလိုက်လည်သွားတယ်နော်။
သဲနုရေ ခြေကျင်ပြန်တက်နိုင်မှလိုက်နော် :harr:
တစ်ရက်ပဲ ကွာတယ် … ၁ရ ရက်နေ့က ဓါတ်တော်ချိုင့်ကို ရောက်ခဲ့တယ် ..
အဆင်း ၄၅ မိနစ်၊ အတက် တစ်နာရီကျော်ကြာတယ် …
ကျန်းမာရေးကို နဲနဲကြွားပြီးပြောရရင်တော့ အေးအေးဆေးဆေး အဆင်းအတက် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် … အမေ့ကို စောင့်ခေါ်ရလို့သာ အဲဒီလောက်ကြာခဲ့တာ …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်တုန်းက တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတယ် ..
အဲဒါနဲ့ ဘယ်လောက်များ တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားလဲလို့ ပြန်ဆင်းကြည့်တာ ဘာမှမထူးဘူး .. လမ်းနဲနဲပိုကောင်းလာတယ် .. အရင်က ဒီ့ထက်ဆိုးတယ် ..
ခေါ်သွားတာ။လမ်းပျောက်နေလို့ ၂ နာရီလောက်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဖြတ်လမ်းကသွားတဲ့လူရယောက် ပဒူ /ပိတုံးလား (မမှတ်မိတော့)
အောက်ကနေပြန်တက်ရင် ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်အရောက်မှာ ကျောက်ဂူနဲ့ ဘုရားရှိတယ် .. ဘုန်းကြီးလဲ ရှိတယ် … မသွားခဲ့ဘူးလား … သဘာဝဂူက တော်တော်လှတယ် …
မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ ဆင်းပြီး ၈ နာရီလောက်မှာ ပြန်တက်ခဲ့တာမို့လို့ မပူခဲ့ဘူး … ကျောက်ဂူထဲကို မဝင်ချင်ပေမယ့် အအေးရောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေက အတင်းခေါ်လို့ … ဆရာတော်က မွေးနေ့အလှူလုပ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ အားနာနာနဲ့ သွားလိုက်တာ … ကြာဇံချက် စတုဒီသာကျွေးတယ် .. လက်ဖက်သုတ်လဲပါတယ် …
နဲနဲစားပြီး ဆရာတော့်မွေးနေ့အတွက် ငွေတစ်သောင်းလှူခဲ့လိုက်တယ် …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးပြီး နောက်ပိုင်း အဲဒီဘက်ခဏခဏ
ရောက်ပေမယ့်လည်း မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး။ အပြောင်းအလဲလည်း မရှိဘူးလို့ ပြောကြတာလဲပါလို့လေ။
အလွမ်းပြေ ပုံတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးနော်။
ကိုခေ၇.. မေမြို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ပေမဲ့
ရေတံခွန်အောက်ဆင်းတဲ့လမ်းကလေးတွေကောင်းအောင်လုပ် …landscape ပိုင် းနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီး ( လမ်းတစ်လျှောက်ပန်းလေးဘာလေး စိုက်) Security purpose လေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကို အန်တီဝေသွားခဲ့တဲ့ ရွှေလီကရေတံခွန်လိုမျိုးလေး လုပ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပြစားရမှာ …မွေးရပ်မြေမို့လို့ တိုးတက်စေချင်တယ်…ပြောရင်းလွမ်းလာပြီ…အဟင့်
မနိုတို့သွားတုံးကတောင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ၂ယောက်တဖွဲ့ ၃ ယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ ၁ဝယောက်လောက်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်
BE Fall နဲ့ ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် အတူတူပဲလား။
မြင်ဖူးတဲ့ BE Fall က ပိုမြင့်သလားလို့။ :hee:
အားရပါးရ က ပြချင်ပါသော်လည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်း လို့ လူပျက်တွေ ပျက်ကြသလို….
မနို စာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်သိပြီး သွားချင်စိတ်ပျောက်သွားပါကြောင်းးးး :eee:
မမရေ … BE Fall က ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ နောင်ချိုမြို့ဘက်အထွက် မဟာအံ့ထူးကံသာ ပြည်တော်ချစ်ဘုရားအောက်နားမှာပါ..ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်က မန္တလေးဘက်က အဝင် အနီးစခန်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှိတာပါ. သာယာပုံချင်းကတော့ တစ်မျိုးစီကွာမလားလို့ ..ပိုမြင့်တယ်ဆိုတဲ့ရေတံခွန်က တော့ ပိတ်ချင်းမြောင် ရေတံခွန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ပြင်ဦးလွင်မှာ အထင်ကရ ရေတံခွန်သုံးခု ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.
အမ မမရေ. တစ်ခါတစ်ခေါက်တော့ ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ
နွေမို့လို့ အောက်က ကန် က ဝါနေတာလားမသိဘူး ..
ငယ်ငယ်တုန်းကရောက်ဖူူးတာ မှတ်မိတာတော့ ရေကစီမ်းလို့ .. ရေကူးသင်ပြီးကာစ ပထမဆုံး ရေဆင်းကူးခဲ့ တဲ့ နေရာလေး .. သစ်ကြီးဝါးကြီးနဲ့ နေပျောက်မထိုး စိမ်းစိုနေတာ .. အခုတော့ ကြည့်ရတာ ခြောက်သွေ့ နေသလိုဘဲ ..
ရေတံခွန်က ရွှေလီထက်ပိုလှမယ်လို့ ထင်ပါသည် ။
မဝေ မှတ်ချက်လေး သိချင်သား ။
သွားတဲ့ လမ်းကတော့ ရွှေလီကို မယှဉ်နိုင်လောက်ဘူး ထင်တယ်နော် ။
မဝေပုံလေးလဲ စောင့် မျှော်နေပါတယ် ။
အပြန်မှ ဝင်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့ အခြေအနေ အရ မဝင်ဖြစ်လိုက်ဘူး .. မဝင်ဖြစ်တာလည်း ခပ်ကောင်းကောင်း .. ဝင်နိုင်မဲ့ ပုံလည်း မပေါ်ဘူး .. :hee:
အဲဒီမှာ ၁ဝနှစ်လောက် အအေးလိုက်ရောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးပြောတာကတော့
အဲ့လိုရေနောက်လာရင် လူခေါ်ချင်လို့ လို့ပြောတာပဲ (ရေနှစ်သေတာကို ပြောတာ)
ရေတံခွန် စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် ကော့သောင်း မှာလဲ မလိဝမ်း ရေတံခွန် ဆိုပြီး လှပတဲ့ ရေတံခွန် တခုရှိပါကြောင်းနဲ့ သွားရတာလည်း မပင်ပန်းပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်။
သီလရှင် ထွက်ပြီပေါ့ …
ပုံတွေ အားပေးသွားတယ်ဗျာ …
ဟိုထိပ်ဆုံးပုံထဲမှာ အလယ်က ခန့်ခန့်ဂျီးနဲ့က ဘူဒုံး သိဝူးးနော် ..
စကားမစပ် .. အိုက်ပုံထဲက ဘယ်ဘက်ဆုံး တီလောက်က ဘူလေးလဲ …
အိုက်ဒါ ဘူလေးလဲ ….
ဓါတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်က ပြင်ဦးလွင်ကို သွားတိုင်း ဝင်ဖို့ အဆင်မပြေတတ်ဘူး
သူ့အတွက်က အချိန်သပ်သပ် ပေးရတတ်တာမို့ တကူးတကပဲ သွားတတ်တယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာ အောက်ရောက်မှ ရေတံခွန်ကို အငမ်းမရ ရိုက်ရင်း ချော်လဲလို့ ကင်မရာ လစ်သွားတာပဲ
ဟို့ဝေ့ဒီဝိုက်နဲ့ ဓါတ်တော်ချိုင့်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဘူး သေးလို့ပါ။
မေမြို့ကိုတော့ဖြင့် တစ်ခါရောက်ဖူးတယ်..အဲ့ဒီနေရာကို မရောက်ခဲ့ဘူး…
ဘယ်လိုသွားရတယ် ဆိုတာလေး ဗဟုသုတရလို ကျေးဇူးပါ….
ကျနော် ငယ်ငယ်က မေမြို့မှာလေးနှစ်လောက် ကျောင်းနေဖူးတယ်
ဒါတောင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူး သေးဘူးဗျာ..
မရောက်ဘူးသေးတဲ့ နေရာတွေ ကြည့်ခွင့်ရလို့ ကျေးကျေးပါ မနိုရေ …
လှလိုက်တဲ့ ့…ရေနှစ်ခွန် ကြီး..
တစ်ခါတစ်ခေါက်တော့ အရောက်သွားပါဦးမည် ။
ဘာမှ မမြင်ဘူး … အပေါ်ဆုံးပုံက သာမီးလေးဒွေကိုဘဲ မြင်နေတော့တယ်။ မှတ်ချက် ယောကျင်္ားဘောင်းဘီ ယူဝတ်ထားတဲ့ ဂျီးဒေါ်မပါ …. အာဟိ
အခုလို ဗဟုသုတရအောင် ပုံလေးတွေပါ တင်ပေးထားတဲ့အတွက်
ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးခဲ့ဘူး..